Ukukhetha izicathulo ezinhle kakhulu zasebusika
Ukukhetha izicathulo zasebusika ezipholile nezikhwalithi kungumsebenzi weNombolo 1 ngowesifazane ekuqaleni kwenkathi ebandayo. Inselele enkulu ukukhetha hhayi kuphela ukhululekile kodwa futhi izicathulo imfashini, lapho ungakwazi ngesikhathi esisodwa ahlale engaqiniseki futhi uzizwe ujabulise ngisho eqhweni. Ukwazi lokhu, igama elithi "Econika" lilungiselele ukuqoqwa kwasebusika kwezicathulo zabesifazane, kuhlanganise induduzo kanye nemikhuba yamanje yethando.
Izikebhe, ama-sneakers noma ama-sneakers ebusweni?
Emakhakheni asekwindla nakusihlwa asebusika abanikeze izikhumba zendawo yonke ngesitayela sezempi, amasinki aphethe, ama-sneakers ebusika obomvu, amabhuzu aphezulu esiteshini. Kuningi lokukhethwa kukho, kodwa yikuphi ozoyeka?
Abadlali be-Snickers noma, njengoba bebizwa nangokuthi, ama-maranth - amasinki emgodini ofihliwe, umkhonto oyinhloko wezinwele zezinkathi eziningana. Zihlanganisa ngokugcwele izicathulo zezemidlalo kanye nomusa wezicathulo zesifazane. Amamodeli athandwa kakhulu kulo nyaka azofudumala izikhwama zesikhumba ezinemibala ehlukene: kusuka kumathoni amathoni amnyama asundu-bhantshi kuya emicibisholo emnandi ye-shades e-golden-pink.
Ama-sneakers asebusika - okunye ukuhluka okuthandwayo esihlokweni sezicathulo zabafazi abakhululekile nabasethingi. Eqinisweni iyoba yikhumba lesikhumba ekupheleni koboya bemvelo. Umehluko omkhulu phakathi kwama-sneakers kanye ne-Snyerses-Maranths yiyona yedwa yedwa, okuyinto le nkathi ingaba phezulu futhi ikhulu kakhulu. Enye i-nuance ebalulekile: inhlanganisela engavamile nemikhakha yembala. Ikakhulukazi kumantombazane asebenzayo abonga induduzo nembala ekhanyayo, abakhiqizi be-"Econika" banikeze amasinki e-stylish burgundy anezikhumba ze-matte ne-varnished - ekhululekile futhi ephathekayo ngesikhathi esisodwa.
Amabhuzu wabesifazane ngesitayela sempi - futhi phakathi kwezintandokazi zezicathulo ezikhululekile zezinkathi ezizayo zasebusika. Amamodeli asetsheni, futhi amabhuzu ngesithende esivamile ayophinde athandwe. Inzuzo enkulu "izicathulo zempi" ukuzinza. Kulezi zicathulo zasebusika ezinezinkundla zokukhulula, akukho neqhwa noma i-ice cover. Amamodeli akhululekile kakhulu aseqoqweni lasebusika e-"Econika". Isibonelo, abalandeli besitayela se-grunge bazothola izikhumba ezinonya ezenziwe ngesikhumba sangempela kusuka eRIAROSA.
Yini okufanele ugqoke ama-sneakers kanye nezigaxa ebusika?
Lapho ukhetha isihlangu esifudumele esifudumele udinga ukucabangela hhayi kuphela ukufaneleka komodeli, kodwa futhi ukuhambisana kwayo nezinye izinto kusuka ikhabethe lakho lasebusika. Kule ndaba, ukhetho oluzobe lukhona jikelele luyoba amasinki angasetshenziswa. Zihlanganiswe ngempumelelo nazo zonke izitayela zangaphandle. Isibonelo, isithombe esilula kodwa ngesikhathi esifanayo nesitayela esivamile singadalwa ngokuhlanganisa ijaji eliphoqelekile ne-velor black snickers ALLA PUGACHOVA. Izibhamu zegolide ezimhlophe ezihambisana nesigqoko soboya noma isambatho somboya zizobonakala zihlanzekile, zingavamile futhi zikhazimulayo. Futhi esembathweni esinokunethezeka sejacket lesikhumba nama-sneakers, uzobukeka uhlelekile futhi ube nemfashini.
With overcoat enkulu oversize, ibhantshi ibhomu, ipaki noma ijaji phansi, ubhantshi ubucathulo kuhlangene kahle. Bangasiza futhi ukudala isithombe esingavamile esibhanqwe ngengubo yobude obuphakathi. Amabhuzu ezempi amabhinti aphansi kakhulu, ngakho-ke afaneleka kakhulu kwansuku zonke agqoke ngejazi eliphansi noma ijaji.
I-pop art no-Andy Warhol kumagazini olinganiselwe Uxhumana no-2015
I-Sex Morning: Izinzuzo Nezikhundla
Indlela yokusebenzisa izimonyo ebusweni bakho?
Inkukhu isobho ngekholifulawa
Siyakuhalalisela ngo-September 1, 2017 kubafundi nothisha
Ukufunda ukuxhumana nezinye izingane
I-Knitwear - isitayela se-stylish sonyaka-2016
Ukuthuthukiswa komuntu wesifazane kumlingiswa wesifazane
Isifuba senkukhu esitsheni
I-cartoons yezingane ezineminyaka emithathu ubudala
Biography kanye namafilimu kaJohnny Depp
Imikhiqizo ewusizo yomzimba wesifazane